. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: June 2011
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/09/2011 03:42:00 PM5comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/05/2011 11:30:00 PM 14 comments:
စိတ်ကျရောဂါသည်တယောက်အတွက် "စိတ်ကျရောဂါသည်" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လိုပါသလား ..
ဒါဆိုလည်း မီးသွေးခဲနဲ့ ကျမနဖူးမှာ ရေးလိုက်မယ် ..
ကျမနဲ့ ပတ်သက်ချင်ရင် ရှင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရောဂါတခုရှိသင့်တယ် ..
"စိတ်မနှံသူ" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ယူ ..
ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း အရူးလို့ ကျမ မပြောဘူးနော် ..
ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ နာမည် သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ် ..
၀မ်းတွင်းမရူးပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ သဘောတရားကိုယ်စီနဲ့ ရူးတယ် ..
ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်/အတွက် ရူးတယ် ..
တခါတလေ ရူးချင်ယောင်ဆောင်တယ် အရူးကွက်နင်းတယ် ..
ဒီကစားနည်းကို ကိုယ်စီကျွမ်းကျင်တယ် ..
ဆရာသမားအတွက် ဗာရာဏသီထိ တက်စရာမလို ..
ကျွမ်းကျင်သူတွေ နီးနီးနားနားရှိတယ် ..
ဘယ်ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်လိုပါသလဲ ..
အိုး .. တခုမကဘူး အကုန်နားလည်ချင်လို့လဲရတယ် ..
စိတ်ဝင်စားဖို့သာ လိုပါတယ် ..
လူတွေက အရူးတွေလို့ ဆိုပါတယ် .. တချို့က မသိမသာ တချို့က သိသိသာသာ .. တချို့က ဖုံးဖုံးဖိဖိ .. တချို့က မဖုံးနိုင် မဖိနိုင် ..
ယဉ်ယဉ်လေးတုန်းက မသိသာပေမယ့် အရူးရင့်ပြီဆိုတာနဲ့ အရှက်ဆိုတာကို မသိပါဘူး .. အမှားအမှန် မခွဲခြားနိုင်ပါဘူး .. ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာတောင် မသိနားမလည်နိုင်ပါဘူး ..
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အိမ်က လမ်းမတန်းမှာ ရှိတယ် .. အဲဒီနားမှာပဲ အရူးမကြီး(ကန်တော့ ကန်တော့)/အဒေါ်ကြီး တယောက် ရှိပါတယ် .. တရက် အဲဒီသူငယ်ချင်း အိမ်မှာ ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေစုံနေတုန်း မိုးတွေလည်း ရွာနေပါတယ် .. မိုးရွာတော့ ရန်ကုန်လမ်း ဗွက်ပေါက်ပြီပေါ့ .. မိုးတိတ်တော့ အဲ့အဒေါ်ကြီးက သူငယ်ချင်း အိမ်နားမှာပါ .. ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ အဲဒီဗွက်အိုင်ထဲ ဆင်းထိုင်ပြီး (ကန်တော့ပါရဲ့) ရှူးရှူး ပေါက်ပါတယ် ..
ဟိုက အရူးပဲ .. ဘယ်သူက ဘာပြောမလဲ .. ကြည့်နေတဲ့ လူက ကြည့်နေတယ် .. ဟားနေတဲ့လူက ဟားနေတယ် .. ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလဲ စိတ်က အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမယ် ..
စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့ လူကောင်းဆို အရူးလုပ်သလို မလုပ်ပါဘူး .. ဒီတော့ လူတွေအဟားမခံရဘူးပေါ့ ..
စဉ်းစားတတ်သေးတဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးသမားဆိုလည်း အဲလို မလုပ်ပါဘူး .. ဒီတော့ လူတွေ ပေါ်တင် မဟားရဲဘူးပေါ့ .. လူကောင်းလို့ ပြောလို့ရသေးတာကိုး ..
ဟော .. အရူး .. အရူးမှန်းသေချာတဲ့ အရူးကိုတော့ ဘယ်သူက ရှိန်မလဲ ကြောက်မလဲ .. လက်ညှိုးထိုးပြီး ဟားတိုက်ရဲတာပေါ့ .. စမယ် နောက်မယ် ဟားမယ် .. (တကယ်တော့ ဒါဟာလည်း ကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ .. အဲလို အရူးတောင် အလွတ်မပေးတတ်တဲ့လူမျိုးဟာလည်း အတော်ကို ရွံစရာ ကောင်းနေပြီပေါ့ .. ပညာမဲ့တွေဟာတော့ လုပ်ကောင်းလုပ်မယ်)
ကိုယ်ဟာရော ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါနေလဲ .. ယဉ်ယဉ်လေးလား .. ရင့်နေတဲ့ အရူးလား ..
မှတ်ချက် - ခုတလော လူက အူကြောင်ကြားဖြစ်နေရတဲ့အထဲ မြင်လိုက် တွေ့လိုက်သမျှကလည်း စိတ်ပျက်စရာချည်း ဖြစ်နေပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တောင် ဖြစ်သွားပါရောလား .. :D
စိတ်ကျရောဂါသည် = ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူး (သတိထားကြနော် .. ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးရှောင်ကြ :P)
ရေးသားသူ မိုးခါး at 6/01/2011 11:48:00 PM 18 comments: